ရေးသားသူ poemflower at Thursday, December 24, 2009
မိုးမောင် December 24, 2009 at 3:13 PM
ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်လွမ်းသူမို့လို့ ခံစားသွားပါတယ်။
ညခင်း December 24, 2009 at 4:43 PM
ညခင်းကတော့ အိမ်လွမ်းသူ မဟုတ်ဘူး အိမ်ပေါ်က မဆင်းသူ....ကုတ်နဲ့ကော်ချတောင် မဆင်းဘူး လို့ ရီစရာ ပြောခဲ့ဘူးတယ်...မိဘအရိပ်က အအေးချမ်းဆုံးပဲ...
ပန်းကဗျာရေ... ပုဂံညောင်ဦးပုပ္ပား ဘုရားဖူးသွားမယ်...မလိုက်ဘူးပေါ့နော်.. :D :P
နေ့အိပ်မက် December 24, 2009 at 5:09 PM
အင်း ဒါလည်းအိမ်လွမ်းနည်းတစ်မျိုးပဲနော် မမ
YoungGun December 24, 2009 at 5:46 PM
အိမ်လွမ်းသူ..တဲ့။ လှိုက်ခနဲပဲဗျာ ရင်ထဲ.မကောင်းဘူး။ လွမ်းစရာ အိမ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြန်ခရီးက ခက်တယ်။ ထူးအိမ်သင်သီချင်းထဲကလို နေညိုညိုလမ်းလေးထက်က စောင့်နေတယ် ..။ မျှော်လင့်ခြင်းများရယ်..အိမ်ပြန်ချိန်များရယ်.။
Anonymous December 24, 2009 at 7:27 PM
အားလုံးထက် နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့နေရာဟာ အမေ့အိမ်ပဲလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကြတော့ .
ကျွန်တော်လည်း ဟို.. အဝေးမှာ ရောက်နေခဲ့တယ် အစ်မရေ.. ခံစားဖတ်ရှုသွားပါတယ်..။
kokomaung.uk December 24, 2009 at 7:42 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ လွမ်းလာပြီ။ အမိနိုင်ငံ။ မွေးရပ်မြေ။ အမေ။ အားလုံး လွမ်းစရာတွေချည်းပါဘဲ။
ပန်းကဗျာလဲ အမေကို သတိရနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေပါတယ်။
shwezinu December 24, 2009 at 7:56 PM
သနားတယ် ညီမလေးရယ် တချိန်မှာတော့ ပြန်နိုင်မှာပါ
Welcome December 25, 2009 at 2:41 AM
Anonymous December 25, 2009 at 11:34 AM
မမရေ ..... ဘယ်တော့မှ မေ့မရတဲ့ မိဘမေတ္တာနဲ့ နားခိုခဲ့တဲ့ အိမ်လေးဟာ တစ်ဘ၀စာအတွက် တသက်လုံး လွမ်မပြေတဲ့ နေရာလေးပါ။ မမရဲ့ အိမ်အလွမ်းလေးကို ရင်နဲ့ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။
မြစ်ကျိုးအင်း December 25, 2009 at 8:11 PM
ပြန်ဆုံတွေ့နိင်အောင် အားလုံးကျန်းမာပါစေပဲ ဆုတောင်းနေဖြစ် တယ်။
မောင်သုံည December 26, 2009 at 8:43 PM
သို့ သော် အိမ်လွမ်းသူ ကတော့ ကျွန်တော့ရင်ကိုဘလောင်ဆူ
လောကကြီးနဲ့ တွေ့ ခွင့်ပေးတဲ့ အန္တကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုရောပေါ့၊
သုခ ဒုက္ခတွေက ဝေဒနာ ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျဉ်းကြောင်းပေါ်ကဆို
shankha December 27, 2009 at 9:12 PM
အိမ်ပြန်ချင်နေပြန်ပြီ အမေမျက်နှာကိုလည်း မြင်ယောင်မိတယ်ဗျာ...
liver December 28, 2009 at 4:29 PM
me too. i leave from home about 1 month . but i always remember my home, my family!!!!!!!!!!!!!!!!
zox December 29, 2009 at 1:11 AM
အေးဗျာ။ လွမ်းပုံလွမ်းနည်းလေးတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးရဲ့ ကိုယ့်အိမ်အပေါ် လွမ်းကြတဲ့ အလွမ်းလေးတွေကို တစ်မျိုးစီ သိခွင့်ရတော့ အလွမ်းမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် မပန်းကဗျာရေ။ အင်း... အားလုံး အိမ်လွမ်းသူ ဘ၀တွေကနေ မြန်မြန်ကျွတ်ကြပါစေ။
မေကျော် December 30, 2009 at 2:07 PM
ထူးအိမ်သင် သီချင်းလေးပါ တင်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်နော်...း) .. လာလွမ်းသွားတယ် မမရေ
မေကျော် December 30, 2009 at 4:39 PM
သီချင်းကိုလေ အမတို့ဆိုက်ကနေ ကော်ပီကူးသွားပြီး ပြန်တင်ထားတာ အမ...
ဒါပေမယ့်လေ တင်ပြီးမှ ခွင့်လာတောင်းရတာ စိတ်ထဲ မသန့်လို့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်.... ဟီး .... ခွင့်လွှတ်နော်
မောင်ငရ် January 18, 2010 at 8:23 AM
I`m also miss my home..
wanna fly to my mom..
now , wanna cry..
where`s my way..